Gịnị Mere Anyị Ji Bụrụ Mkpụrụ Obi? - Ngụda na Alaeze ahụ
Otu nwoke onye North-American, onye choro ka a ghara ịma aha ya, onye anyị ga-akpọ Walter bụbu onye na-ekwu okwu mkparị, na-etu ọnụ, ma na-akwa emo n'okpukpe Katọlik, ọbụna ruo n'ókè nke ịdọpụ chaplet mama ya n'aka aka ya na-ekpe ekpere, na-achụsasị ha n'ofe ala. Mgbe ahụ ọ gabigara mgbanwe miri emi.
Otu ubochi, enyi ya na onye oru ya, Aaron, onye omere ntughari na Medjugorje, nyefere Walter akwukwo nke ozi Mary's Medjugorje. Kuru ha na Katidral nke Sacrament Ngozi n’oge ezumike nke ehihie ya n’ebe ọrụ ya dị ka onye na-ere ala na ụlọ, o riri ozi ndị ahụ wee mee ngwa ngwa bụrụ nwoke dị iche.
“Nke ahụ dị mma, Walter,” ka Aaron zara, “ma ọ bụ n’elekere itoolu nke ụtụtụ, anyị nwekwara ọrụ ịrụ. Anyị nwere ike ikwu banyere ya ma emechaa.”
Ya mere, ka njem na Chineke na Nwanyị anyị malitere njem nke Walter na-agaghị echeworị. Ka Walter na-ala ụgbọala ma ọ lọta ọrụ otu ụbọchị, mmetụta siri ike n'obi ya, dị ka obi mgbu nke na-emerụghị ahụ, dakwasịrị ya na mberede. Ọ bụ mmetụta nke obi ụtọ nke ukwuu nke na ọ nọ na-eche ma ọ ga-enwe nkụchi obi, ya mere ọ kwụsịrị okporo ụzọ awara awara. Mgbe ahụ ọ nụrụ olu nke o kwenyere na ọ bụ Chukwu Nna: “Nne Ngozi ahụ ahọrọla gị ịbụ ngwa ọrụ nke Chukwu. O ga ewetara gi nnukwu ule na oke ahuhu. Yoù dị njikere ịnabata ihe a? ” Walter amaghị ihe nke a pụtara-naanị na a na-agwa ya ka eji ya rụọ ọrụ dị ka ngwa ọrụ Chineke. Walter kwetara.
Ugbu a ozi ndị a, ndị na-agba ume, na-akpụzi, na-ama aka, ma na-ewusi ihe fọdụrụnụ kwesịrị ntụkwasị obi n'oge ndị a, oge ọgwụgwụ, dị maka ụwa. Na mkpokọta, ha dị na akwụkwọ: Nwanyị Na-egosi Wayzọ: Ozi Eluigwe maka Oge Nsogbu Anyị. Ozi ndị a nke ọtụtụ ndị ụkọchukwu nyochara nke ọma ma chọpụta na enweghị nkuzi nkuzi, ejiri obi ha niile akwado Archbishop Emeritus Ramón C. Argüelles nke Lipa.
Ozi sitere na mkpụrụ obi eleghi anya
Mkpụrụ obi enweghị ike - ngwa ọgụ gị kachasị megide mmụọ ọjọọ nke mpako
Ana m emetụ gị aka, ana m ekpekwa Chineke ekpere maka ihe kacha dịrị mkpụrụ obi gị mma.
Nnukwu mgbanwe na oge nke obodo gị
Mortifications bụ obere ifuru ịhụnanya.
Ọtụtụ n’ime unu ga-ahụ ọ returnụ nlọghachi nke Ọkpara m.
Jidesie m ike. Ọchịchị onye iro agwụla.
← Gịnị kpatara Mkpụrụ Osimiri Californian?
Gịnị kpatara Edson Glauber? →